မှရှုခင်းထည့်သွင်းခြင်း FSX 1 months ago 10 တစ်နှစ် #1185
FSX ရွှေ, ဘောငျ
After upgrading to windows 8.1, I finally was able to load MSFS X. However I'm having trouble loading add-on ရှုခင်းဖိုင်များ။ ငါပြေးသောအခါ FSX under windows XP, I had no real trouble loading and using add-on scenery files. But after loading in windows 8.1 things don't seem to work as well, for example, Tyler Newport's "Fly Delta Jets" sign on the TOC hanger in ATL. I loaded it the same way as before but it doesn't appear. Are there changes to how things are done if FSX 8.1 ရှိပါသနည်း သည် "ဘောငျ, ရွှေ Edition ကို" ဟုအဆိုပါဝန်ဆောင်မှု paks 1 &2လိုအပ်ပါသလား? မဆိုအကူအညီတောင်းတန်ဖိုးထား။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Niells618
မှရှုခင်းထည့်သွင်းခြင်း FSX 1 months ago 10 တစ်နှစ် #1188
FSX ရွှေ Edition ကိုဖြစ်ပါတယ် FSX Deluxe, အရှိန်မြှင့် PLUS Add-on Pack. You can't have the acceleration add-on pack unless you already have the service packs installed.
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပြုသကဲ့သို့အရာရာနေပါစေအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ OS ကို, တူညီတဲ့အရပျ၌တတ်၏။
မှရှုခင်းထည့်သွင်းခြင်း FSX 1 months ago 10 တစ်နှစ် #1190
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ သိရန်ကောင်းသောငါ SP 1 &2မလိုအပ်ပါဘူး။
0.204 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်